PTFE Envelopu EPDM gasket - CIXI DONGFENG akara & mbukota Co., Ltd
PTFE envelopu EPDM gasket na-eji jaket PTFE aghọwo ihe ewu ewu maka iji rụọ ọrụ na-emebi emebi n'ihi obere min. Nchegbu ebe obibi, nguzogide magburu onwe ya, nrụrụ dị elu na nhọrọ nke ihe dị iche iche iji kpochapụ arụmọrụ kachasị na ngwa ọ bụla. Njirimara Ngwaahịa: l Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100% na-eguzogide ọgwụ na-eguzogide ọkụ: -200 ~ + 260 ℃ l Nrụgide nrụgide: 4Mpa Ngwa PTFE envelopu gaskets na-ejikarị na nri na usoro ụlọ ọrụ mmepụta ihe ...
Ịkwụ Ụgwọ Okwu: Western Union ma ọ bụ PayPal ， T / T, L /
PTFE envelopu EPDM gasket na-eji jaket PTFE aghọwo ihe a ma ama maka iji rụọ ọrụ na-emebi emebi n'ihi obere min. Nchegbu ebe obibi, nguzogide magburu onwe ya, nrụrụ dị elu na nhọrọ nke ihe dị iche iche iji kpochapụ arụmọrụ kachasị na ngwa ọ bụla.
l Ọ fọrọ nke nta 100% na-eguzogide ọgwụ
l Okpomọkụ na-eguzogide: -200 ~ + 260 ℃
l Pressure-eguzogide: 4Mpa
A na-ejikarị akpukpọ mkpuchi PTFE envelopu n'ọtụtụ ebe na nri na nhazi ụlọ ọrụ ebe enweghị ike ikwe ka mmetọ nke onye na-ajụ ya. Adabara ọkara ike alkalis, cryogenic oke mmiri, oxygen, chlorine gas wdg